सात दिने लकडाउनलाई ७ फिल्म– ६- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १६, २०७६ यज्ञश
काठमाडौँ — दस वर्षे सशस्त्र युद्ध, प्रलयकारी भूकम्प, छिमेकीको नाकाबन्दी र अहिले कोरोनाको महामारी । कुनै समाजको एउटा पुस्ताका लागि यीमध्ये कुनै एउटा पनि घटना सकसपूर्ण हुनसक्छन् ।
वर्तमान नेपालको २०३६ सालको जनमत संग्रह र २०४६ सालको जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा हुर्किएको पुस्ताले यी सबै कुरा भोग्यो र भोगिरहेको छ । यसैले यो पुस्ता निस्सासिँदा खबरहरु सुन्न अभ्यस्त भइसकेका छ ।
लकडाउनको आज छैटौं दिन । लकडाउनको सात दिने अवधि सिद्धिन लाग्दा सरकार यसलाई तन्‍काउने तयारीमा लागेको समाचारहरु आइरहेका छन् ।
‘इन द मुड फर लभ’ (२०००, हङकङ)
गत वर्षको कुनै एक बिहान म पनौती नगर पुगेको थिएँ, फोटोपत्रकार अंगद ढकालको मोटरसाइकलमा । चल्तीको भाषामा यो एउटा सुटिङ रिपोर्टका लागि थियो । तर, खासमा भने यो सेटमा केही मानिसहरु थिए, जसलाई भेट्नु थियो । प्रसिद्ध भुटानी फिल्ममेकर एवं रिम्पोछे खिन्से नोर्वुको फिल्मको सुटिङ यहाँ चलिरहेको थियो– ‘लुकिङ फर अ लेडी विथ फ्याङ्य एन्ड मुस्टाच’ । ‘ट्राभलर एन्ड दि मजिसियन’ फिल्म बनाएदेखि नोर्वु फिल्म जगतमा चर्चित छन् ।
यो सेटमा अर्का एकजना ‘मास्टर’ कलाकार थिए– मार्क ली पिङ विङ । जसरी एउटा धुनले संगीतकार, एउटा किताबले लेखक र एउटा विश्वकपले म्याराडोना जन्माउँछ, त्यसरी नै कलाकारको पनि एउटा मास्टर स्ट्रोक हुन्छ । ‘इन द मुड फर लभ’ मार्क लीको त्यो मास्टर स्ट्रोक हो ।
खासमा यो फिल्मभन्दा अघि मलाई कुनै सिनेम्याटोग्राफरले फिल्मलाई ‘बनाइदिन्छ’ भन्ने बोध थिएन । वङ कर वाई हङकङका उस्ताद फिल्ममेकर हुन् । उनको व्यक्तित्व र र फिल्मोग्राफीको आफ्नै उचाइ छ । तर, यो फिल्मचाहिँ मार्क लीको क्यामेराको कमाल हो ।
सट साइज कसरी डिजाइन गर्नुपर्छ ? क्यामेराले अब्जेक्टलाई कसरी ग्लोरिफाइ गर्छ ? साँघुरा गल्लीहरु कसरी मानिसको मनभित्र छिर्ने चेपजस्ता लाग्न सक्छन् ? फराकिला सडकहरुमा लाइट कसरी लगाउनु पर्छ ? र, चरित्रको मुडलाई दृश्यमा कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ ? यसको एउटा आख्यान हो, ‘इन द मुड फर लभ’ । यो फिल्मका लागि मार्क लीलाई कानले विशेष सम्मान पनि प्रदान गरेको थियो ।
जसरी एक्सन– ग्याङस्टर फिल्म बनाउनेहरु फ्रान्सिस फोर्ड कोप्पोलाको ‘गडफादर’ र क्विन्टन टोरेन्टिनोको ‘पल्प फिक्सन’लाई कुनै ग्रन्थजस्तो मान्छन्, रोमान्टिक फिल्म बनाउनेहरुका लागि ‘इन द मुड फर लभ’ त्यस्तै हो । समीक्षकहरुले यसलाई क्यामेराले लेखिएको सुन्दर प्रेम कविता पनि भन्ने गरेका छन् ।
यो फिल्म मैले धेरैपटक हेरेको छु । कहिले आधामात्रै रंग देखिने कम्युटरमा त कहिले डिभीडीमा । डिभिडीमा हेर्दा त केसम्म भयो भने बीचतिर पुगेपछि फिल्म पूरा नभइ मेकिङमात्र आउने । चलचित्र समीक्षक समाजको फिल्म प्रदर्शन सन्डे सिनेमामा यसको प्रदर्शन गरेपछि बल्ल धीत मरेको थियो ।
यो कथा हो, सँगै डेरा जोडिएका दुई प्राणीको । १९६२ को हङकङ । ब्रिटिस शासित समय । एउटा पत्रकार र सिपिङ कम्पनीकी कर्मचारी संयोगले एउटै अर्पाटमेन्टका भिन्न कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् । एउटै टोलमा बसेपछि बाटो त काटिन्छ ! उनीहरु पनि एकअर्काको बाटोमा फुत्त फुत्त देखा पर्न थाल्छन् । कहिले सिग्रेट सल्काउँदै । कहिले आँखा झुकाउँदै ।
उनीहरु दुवैलाई आफ्ना पति र पत्नीमाथि शंका छ– कतै उनीहरुले धोका दिइरहेका त छैनन् ? विस्तारै उनीहरुलाई यो सत्य लाग्न थाल्छ । र, लाग्छ– ती दुई नै एकअर्काको प्रेममा छन् । अर्थात्, पत्रकारकी श्रीमती र कर्मचारीको पति नै अफेयरमा छन् । यहींबाट कथा अघि बढ्छ । के आफ्नै प्रेमी वा प्रेमिकासँग बदला लिनलाई त्योभन्दा घनघोर प्रेम गर्नु पर्छ ?
फिल्ममा एउटा सानो लोककथा टाइपको किस्सा छ । उहिल्यै जब कुनै मानिसले केही रहस्यको भेउ पाउँथ्यो तर त्यो कसैलाई भन्न मिल्ने खालको हुन्थेन भने त्यसलाई बिसर्जन गर्ने एउटा उपाय हुन्थ्यो । डाडामा जाने, रुखमा एउटा प्वाल खोप्ने र त्यही प्वालबाट रुखलाई रहस्य भन्ने । अनि माटोले त्यो प्वाललाई टालिदिने । रहस्यलाई सुरक्षित तरिकाले संग्रहित गर्ने यो सबभन्दा उत्तम तरिका मानिन्थ्यो ।
यो फिल्म पनि त्यस्तै सम्बन्धको कथा हो– जो कसैलाई बताउन मिल्दैन । बतासलाई सुनाउदै हिँड्न मिल्दैन । खोलामा बगाइपठाउन मिल्दैन । कहिलेकाहीं फिल्ममेकरले आफ्नो ठूलो कुरा भन्नलाई निकै झिनो बिम्वको उपयोग गर्छन् । र, अन्ततः आफ्नो शिल्पद्वारा त्यो बिम्वको आयातन नै बढाइदिन्छन् । वङ कर वाइले यसमा रुखको टोड्कोवाला बिम्वलाई त्यसरी नै प्रयोग गरेका छन् ।
अव्यक्त प्रेम र आशक्तिको सुन्दर चित्रणका लागि यो फिल्म हेर्नुस् । यसै पनि लकडाउन अर्को एक हप्ता बढाउने सिफारिस भएको छ, तपाईं पनि आफ्ना जीवनका रहस्यहरुलाई उधिन्नुस् । धुलैधुलो जमेका जीवनका स्मृतिहरुलाई यो समयमा टल्काउनुस् । र, कुनै रुख वा भित्तालाई सुनाउनुस् । र, टालेर छोड्नुस् । यो महामारीमा यसरी जोगाएको स्मृति धेरै वर्षपछि फेरि काम लाग्छ कि ! वा भविष्यमा कोही तपाईंका स्मृतिहरु खोज्दै आउँदा त्यसलाई फेला पारेर जिल पो पर्छ कि !
वैकल्पिक फिल्म– ‘माइ ब्लुबेरी नाइट्स’ (२००७)
यो पनि वङ कर वाइकै फिल्म हो । तर, अंग्रेजी भाषाको । फिल्ममा छन्– सुन्दरी गायिका नोरा जोन्स । पण्डित रविशंकरकी छोरी । यसको प्रदर्शनताका वङ कर वाइलाई एउटा अन्तर्वार्तामा सोधिएको थियो– नोरा जोन्सलाई किन फिल्ममा लिनुभएको ? उनको उत्तर थियो– उनले राम्रो अंग्रेजी बोल्छिन्, त्यही भएर ! फिल्ममा जुडी ल र नताली पोर्टम्यानलगायतका कलाकार पनि छन् ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७६ २०:२७
चैत्र १५, २०७६ यज्ञश
काठमाडौँ — धेरै वर्षको प्रयासपछि लियोनार्डो डिक्याप्रियोले अन्तत: ओस्कर पाएको फिल्म ‘दी रेभेनान्ट’मा एउटा दृश्य छ । हिउँ नै हिउँको प्रदेशमा आफ्ना आक्रमणकारीसँग जोडिन आँखा चिम्लेर बेपत्ताले ऊ दौडिइरहेको छ ।
खासमा ऊ होइन, उसको घोडा दौडिइरहेको छ । एउटा खतराबाट भागिरहेको मान्छेले सायद अर्को खतरा देख्दैन, जसरी ठूलो घाउ लाग्दा सानो घाउको पीडा बिर्सिइन्छ ! होशमा आउँदा उसको वरिपरि कि हिउँ छ कि त्यही घोडा, मरिसकेको ।
चिसोले ज्यानै जान लागेपछि उसले कम्मरको छुरी निकालेर घोडाको पेट चिर्छ । सामान्तया: यस्ता दृश्यमा मानिसले जनावरको मासु खाएर ज्यान जोगाउँछन् । यसमा भने हिरोले मासु खाँदैन, आफैं घोडामा विलिन हुन्छ, घोडाको पेटभित्र छिरेर । किनभने ओडारजस्तो यो पेटभन्दा तातो यहाँ अरु केही छैन ।
यसलाई तपाईं जसरी पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ । प्रकृतितिर फर्किएको मानिस पनि मान्न सकिन्छ, मानिसको प्रकृतिसँगको सघर्ष पनि मान्न सकिन्छ ।
लकडाउनको पाँचौ दिन । वातावरण कुनै उपन्यासमा वर्णन गरिएको वा फिल्ममा दर्शाइएको जस्तो हुँदै गइरहेको छ । मास्कले मुख ढाकेका, सुटले जिउ ढाकेका र डरले मन ढाकेका मानिसहरु सडकमा देखिन्छन् । मानौं पृथ्वी कुनै अर्कै ग्रहमा परिणत भइरहेको छ ।
पृथ्वीमा महामारी आएको यो पहिलोपटक होइन । मानिसको इतिहास नै संघर्षको इतिहास हो । सुरुमा प्रकृतिसँगको संघर्षपछि मानिसले आफैं उत्पादन गरेका समस्यासँग जुध्दै गयो। फेरिँदो जीवनशैलीसँगै फेरिएको संघर्षले साहित्य र सिनेमाका पाना भरिएका छन् ।
युवल नोहा हरारी ‘सेपियन्स’मा प्रश्न गर्छन्– ‘चेतना, विज्ञान र प्रविधिका यत्रा क्रान्तिपछि के मानिस साँच्चिकै सुखी भएको छ त ? दिनको १८ घन्टा काममा जोतिने अहिलेको मानिस सुखी हो कि दिनको ४ घन्टा शिकार खेलेर बाँकी समय आराम गर्ने फिरन्ता युगको मानिस सुखी हो ?’
यो आजको विचारणीय प्रश्न हो।
अब लागौं आजको फिल्मतर्फ । सात दिने लकडाउनका लागि सात एसियाली फिल्मको सिफारिस श्रृंखलामा आज पाँचौं फिल्मको पालो । चीन, जापान, कोरिया र भारतपछि आजको पालो कोरोना भाइरसबाट निकै प्रताडित देश इरानको । ससाना विषयमा राम्रा फिल्म बनाउने भनेर चिनिने इरानका एक प्रसिद्ध निर्देशक अब्बास किरुस्तामीको फिल्म ।
टेस्ट अफ चेरी (१९९७, इरान)
सुरुमै भिनिदिउँ, यो फिल्म 'स्लो' छ । र, थपौं यहाँ हतार कसलाई छ ?
आखिर जानु कहाँ छ ? मन्दिर- मस्जिद बन्द छन् । होटल, भट्टी र कारखानाहरु बन्द छन् । अफिस-अड्डा बन्द छन् । मानिस मानिस बीचको भेटघाट बर्जित छ। समय यस्तो आएको छ कि दूरी बनाउने मान्छे सामाजिक कहिलने भएको छ !
कोरोना-कैदी बनेर घरभित्र बसिरहेका मानिसलाई समय बिताउनु नै ठूलो उपलब्धि भइरहेको यदि हो भने यो समयमा जीवनका विविध पाटाहरु तथा संसारका अलग भागका अनेक कथाहरुको 'टेस्ट' किन नलिने ?
यो कथा हो इरानको । फिल्म हो, 'टेस्ट अफ चेरी' । निर्देशक अब्बास किरुस्तामी । इरानी फिल्ममात्र होइन, विश्व सिनेमामा अब्बासको ठूलो नाम छ । २०१६ मा मृत्युवरण गरेका यी निर्देशकले इरानको फिल्मलाई चम्काउने काम गरे । उनको यही फिल्म 'टेस्ट अफ चेरी'ले विश्व प्रसिद्ध कान फिल्म फेस्टिभलमा उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जितेको थियो।
सहरको बाहिरी परिधिको धुले बाटोमा एउटा मानिस एकोहोरो गाडी चलाइरहेको छ। पहाडको परिक्रमा गरेजसरी घुमिरहेको यो मानिसकै कथा हो 'टेस्ट अफ चेरी' ।
खासमा यो मानिस मर्ने सूरमा छ । उसको योजना छ, यतै कतै कुनै खाल्डोमा रातभरी सुत्ने । बिहान आएर कसैले उसलाई उठाओस् । केहीबेर बोलाओस्, टाढैबाट सानो ढुंगाले पनि हानोस् । तैपनि नउठे उसलाई त्यही पुरिदिएर जाओस् । उ खासमा आफ्नै 'ग्रेभडिगर'को खोजीमा छ ।
यो यात्रामा यसले तीनजना मानिस भेट्छ । तीनैसँगको उसको संवाद र ती संवादसँगै फेरिदै जाने उसको मनोदशा फिल्मको कथा हो । अन्त्यमा चेरीको स्वादको पनि कुरो आउँछ । फिल्ममा कथाको त्यान्द्रो छिनिहाल्ला जस्तो छ । संवाद थोरै छन्, घटना झन् थोरै । यसैले यो पनि महशुस गर्ने फिल्म हो ।
यो फिल्मबारे पनि म धेरै कुरा भन्दिनँ, खाली एउटा कुराचाहिँ यो फिल्म मेकिङको सानो प्रसंगबाट भन्छु । तपाईंले याद गर्नुभयो भने गाडीमा यात्रा गरेका दुई पात्रलाई तपाई एउटै फ्रेममा मुस्किलले देख्नुहुन्छ । हरेक पटक जुनचाहिँले संवाद बोल्छ वा जसको प्रतिक्रिया देखाउनु पर्ने हो उमात्रै देखिन्छ । विन्डस्क्रिनको अगाडि दुवै देखिने वाइड सट यसमा छैनन् । यसका मुख्य दुई कारण छन् । एक, यसो गरेर निर्देशकले यी दुई पात्रबीचको दूरीलाई दर्शाए। यिनका बीच कुनै पनि किसिमको निकटता हुन्थ्यो भने यिनीहरु एउटै फ्रेममा देखिन्थे ।
दोस्रो कुरा फिल्मको सुटिङभरि निर्देशक अब्बास पछाडिको सिटमा नै बसिरहे। त्यसैले यदि फ्रेममा दुवैलाई लिइन्थ्यो भने अब्बास पनि देखिन्थे ।
'द विन्ड विल क्यारी अस', 'सिरिन', 'टेन', 'क्लोजअप', 'सर्टिफाइड कपी' र अस्ति जाापनको सिफारिस गर्दा वैकल्पिक फिल्मका रुपमा उल्लेख गरेको 'लाइक समवन इन लभ' अब्बासका अरु चर्चित फिल्म हुन् । लामा छोटा, फिक्सन डकुमेन्ट्री गरी जम्मा ४९ वटा फिल्म अब्बासले बनाएका छन् ।
वैकल्पिक फिल्म- 'एभ्रिबडी नोज' (२०१८)
यसलाई स्पेनी, अमेरिकी वा इरानी जुन फिल्मभन्दा पनि हुन्छ । यसका लेखक निर्देशक असगर फरहादी इरानी भएकाले यसलाई इरानकै मानियो । यसलाई स्पेनकै मान्न पनि सकिन्छ । 'अ सेपरेसन' र 'दी सेल्सम्यान' दुइटा ओस्कर विजेता फिल्म बनाएका इरानी निर्देशक फरहादीको यो फिल्म एक रहस्यको कथा हो । धेरै वर्षपछि आफ्नो गाउँ फर्किएकी एक महिलाको जीवनसँग जोडिएका पात्रहरुको व्यवहारको रहस्य । तर, शीर्षकले भनेजस्तो सबैले थाहा पाएको रहस्य !
हाभियर ब्राडम र पेनिलप क्रुजको जोडीले अभिनय गरेको यो फिल्म अहिलेको समयका दुई उम्दा कलाकारका लागि पनि हेर्नुस् । र, यो अब्बासको फिल्मजस्तो 'स्लो' पनि छैन! यी दुवै फिल्म तपाईको रुचिअनुसारका लागेनन् भने इरानका अर्का प्रसिद्ध फिल्ममेकर माजिद माजिदीका फिल्महरु 'चल्ड्रन्स अफ हेवन', 'सङ अफ दि स्प्यारोज', 'बारान', 'कलर अफ प्याराडाइज' र भारत आएर उनले बनाएको 'बियोन्ड द क्लाउड्स' पनि विकल्प हुनसक्छन् । मखमलबाग बाबु-छोरी मोहसिन र समिराका फिल्म पनि मनपर्न सक्छन् ।
७ दिने लकडाउनलाई ७ फिल्म– ४
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७६ १९:०८